Ungayiphumeza njani ngempumelelo inkqubo yoMntu ezantsi (A10004) | Izisombululo ze-OMG
Namhlanje ukhuseleko lwabasebenzi bebodwa ngumba okhulayo kwaye umbutho uneendlela zesiko (incwadi yezikhokelo) kunye neendlela zanamhlanje (ezenzekelayo). Ukuba sithetha ngeendlela zesiko, lixesha elisebenzisa ixesha, elinzima kwaye elinobuchule. Umzekelo, umsebenzi kufuneka enze yonke into ngesandla ngaphambi kokuba asebenze. Iindlela zesiko zibandakanya inkqubo yealam, kusetyenziswa inkqubo yothungelwano kanomathotholo, ukubonelela ngesixhobo sokhuseleko kunye namanye amanyathelo afanayo ababejonge kuwo umsebenzi omnye. Kwelinye icala, iindleko zala manyathelo ziphezulu. Nangona kunjalo, ukuba sibona elinye icala lengqekembe, izisombululo zanamhlanje kubasebenzi abodwa ziya zixhaphaka kwaye imibutho iyayamkela imihla ngemihla. Ngokwezibalo, imarike yesisombululo yabasebenzi iyodwa iya kutshayela i-260 yezigidi eYurophu kunye nekhamera esemantla yodwa nge-2022. Ezi zisombululo zanamhlanje zibonelela ngeempawu ezininzi njengokulandela umkhondo we-GPS, zibonelela ngeendlela zonxibelelwano, inkqubo yenkqubo yabantu kunye nezinye izinto ezibalulekileyo ezinciphisa umngcipheko onxulunyaniswa nababolekisi bemalimboleko. Izibonelelo zezi zisombululo zilula ukuzisebenzisa, ngaphandle kweendleko ngokuthelekisa iindlela zakudala kunye nokubonelela ngesisombululo senqaku elinye.
Kodwa ngoku umbuzo uphakamisa ukuba yeyiphi eyona nto iphambili ekufuneka uyiphumelele ekufuneka ujonge kuyo ngelixa ukhetha izisombululo zabasebenzi ezizodwa. Kweli nqaku siza kukubonisa ukuba yeyiphi eyona nto ibalulekileyo yempumelelo ekufuneka ujonge kuyo ngelixa ukhetha izisombululo zabasebenzi abodwa:
Izinto ezingaphambi kokuThenga izinto eziPhumelelayo:
Inkqubo yesiLumkiso sokuZenzekelayo: Ukuba sibona kwiindlela zakudala isilumkiso singanikezeli ngolwazi olupheleleyo olungabonakalisi ubunyani bale meko, ke kufuneka sikhethe isisombululo esinye somsebenzi esingathumeli isilumkiso kuphela ngomyalezo kodwa sithumele nendawo kumyalezo kwaye sitsalele umnxeba ku isuphavayiza efanelekileyo Kufuneka ibandakanye nendoda phantsi kwenkqubo ukuba abasebenzi bakho basebenza kwiindawo eziphakamileyo.
Ukunxiba kunye nokufikeleleka: Elona candelo lidlala phambili kwimpumelelo yesisombululo somntu oyedwa kuxa abasebenzi bengaziva bengcatshiwe ngelixa besenza umsebenzi wabo. Ke, ukuba ifowuni ikhululekile ukunxiba ke maninzi amathuba okuba isisebenzi esinye siyisebenzise. Ukufikelela kukwayinto ebalulekileyo. Xa umqeshwa ukwimeko enobungozi, banexesha elincinci kakhulu lokuphendula kufanelekile ukuba lifumaneke kwinxalenye yesibini.
Ngokwezifiso: Umzi mveliso ngamnye unobungozi bakhe obunokubakho onxulumene nabasebenzi bodwa. Ke, khangela ezi zisombululo onokuziguqula ngokweshishini lakho. Njengokufuna isisombululo esinokuthumela isivusi somntu othile, okanye unokuseta indawo ethile ukuba umntu othile ushiya apho umyalezo uza kusiwa kuwe. Ke, jonga isisombululo esinokulungiswa ngokweemfuno zakho kwaye sinokubonelela ngokhuseleko oluphezulu kubasebenzi bakho abodwa.
Ulawulo lolawulo: Umbutho kufuneka ujonge isisombululo esibabonelela ngolawulo olupheleleyo lweempawu zesisombululo. Umzekelo, izixhobo ezizodwa zesisombululo somsebenzi kufuneka zibe ne-app ye-smartphone enikezela njengendawo ahlala kuyo umsebenzi, ngokufanayo, umbutho ungabona apho abasebenzi babo bebodwa bebesebenza khona ngaphambili. Ngokubonelela ngolawulo olupheleleyo banokuqinisekisa ukhuseleko lwabasebenzi bebodwa.
Inkqubo ehlanganisiweyo: Zama ukuthenga ezo zisombululo zinokudityaniswa nenkqubo yakho yangoku okanye eya kukunceda ukudityaniswa nezisombululo oya kuzithenga kwixesha elizayo. Ngokudibanisa zonke izixhobo, unokwenza inkqubo-enobungqina obugcweleyo ngokuqinisekileyo eya kunceda umbutho wakho ekunciphiseni izehlo ezinxulumene nabasebenzi bebodwa.
Phuhlisa umgaqo-nkqubo: Phuhlisa umgaqo-nkqubo ocacileyo malunga nabasebenzi bebodwa kwaye unxibelelane nabasebenzi abodwa. Kufuneka ibandakanye imiyalelo ecacileyo malunga nomsebenzi ngamnye owenzayo kunye nokugxininisa ekusebenziseni izisombululo zokhuseleko.
U qeqesho: Izisombululo ezizodwa zabakhuseli zeza neempawu ezininzi kungenxa yoko kubalulekile ukuba umbutho uqeqeshe abasebenzi ukuba banokuzisebenzisa njani ezi mpawu ngokufanelekileyo. Kwangokunjalo, ngexesha lokuqeqesha umbutho kufuneka uzame ukwaphula nawuphi na umqobo umsebenzi onawo kwezi zisombululo.
Indlela yekherothi kunye nendlela yokubambelela: Umbutho kufuneka ubonelele ngenkuthazo kwabo bayithobela ngqo umgaqo-nkqubo wokhuseleko kwaye besebenzisa izisombululo zabasebenza yedwa. Kwelinye icala, kuya kubakho ukohlwaywa kwabo baphikisana nomgaqo-nkqubo.
Jinga emva: Umbutho kufuneka ujonge emva amaxesha ngamaxesha kwaye ubone ukusebenza emva kokuphunyezwa kwesisombululo sabasebenzi bebodwa. Ukuba izisombululo zizise iziphumo ezimangalisayo kunokuzama ukuzigcina. Nangona kunjalo, ukuba isiphumo asikukhuthazi kuya kufuneka uqale kwinqaku lokuqala elikhankanyiweyo kwinqaku kwaye uzame ukubona ukuba yintoni ingxaki.
Ukuqukumbela, sicebisa i-mantra yempumelelo yesisombululo somntu oyedwa kuxhomekeke kwizinto ezimbini. Okokuqala, kwinyathelo lokuthenga ngaphambi kokuthenga zama ukufumana izisombululo ezizezona zilungele umbutho wakho. Okwesibini, emva kokuthenga, kufuneka uphuhlise umgaqo-nkqubo osebenzayo, uqeqeshe abasebenzi kwaye usebenzise ikaroti kunye nendlela yokubambelela ukufumana iziphumo. Ke, ezi ibizezona zinto zibalulekileyo zempumelelo ekusetyenzisweni kwezisombululo zabasebenzi ezizodwa.
3404 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-7 Namhlanje